Ny fampivoarana Smartplay Smartizon voantso ao amin'ny IBC 2019 - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ny fampivoarana Smartplay Smartplay voantso ao amin'ny IBC 2019
Ny fampivoarana Smartplay Smartplay voantso ao amin'ny IBC 2019
miaraka IBC 2019 rehefa nifarana, tena ilaina amin'ny fijerena ireo sehatry ny haino aman-jery maro be sy manavao izay naseho nandritra ny federasiona. Ny iray izay tena niavaka dia ny an'ny Verizon Media. Tao amin'ny IBC 2019 dia nanomboka ny haino aman-jery Verizon Verizon Smartplay, ny fanavaozana farany natao ho an'ny sehatry ny media.
Inona no Atao Verizon Smartplay?
Verizon Smartplay, fantatra ihany koa amin'ny hoe Stream Routing, dia sehatra Verizon Media izay mitondra fifamoivoizana horonan-tsary amin'ny tambajotra fandefasana votoaty marobe (CDNs), izay mamela ny fotoana fanombohana haingana kokoa sy ny fampihenana indray. Verizon Smartplay dia mampiasa angon-drakitra mpizara sy mpanafika an-tserasera an'i Verizon Media avy amin'ny tamba-jotra manerantany sy fizarana fitaovana ho an'ny fampitaovana ny fifamoivoizana amin'ny dinika. Tena mety hahasoa amin'ny sehatra misy ny tamba-jotra miaina izany. Miaraka amin'ny alàlan'ny fanitarana ny lozam-pifamoivoizana dia harovana amin'ny fampielezampeo ireo mpampiely vaovao.
Ny fomba fampiasan'i Verizon Smartplay ny atiny kalitao tsara kokoa
Ny tombotsoan'ny Verizon Smartplay dia misy:
Fambara fahitana amin'ny doka
Fifehezana ny Blackout
Chief Chief Product, Media Platform ao amin'ny Verizon Media
Raha miresaka momba ny toetran'ny Verizon Smartplay amin'ny antsipiriany kokoa, mpiandraikitra ny vokatra tao Verizon Media, Ariff Sidi nanana izany, "Azontsika atao ny manome ny fahatokisana ny mpijery sy ny mpamatsy votoaty bebe kokoa ny kalitao tsara indrindra ho an'ireo mpijery na aiza na aiza misy azy ireo." Midika izany fa afaka mahazo antoka ianao fa hahazo ny traikefa tsara indrindra indrindra ny mpihaino anao. ”
Manatsara ny fampidiran'ny doka ny Smartplay Smart Verizon
Ho fanampin'ny fifamoivoizana averina, Verizon Smartplay dia miasa ihany koa ho toy ny Debug Ad Server izay nohatsaraina, manolotra fahitana farany farany ka hatrany amin'ny fizotran'ny dokambarotra, izay afaka manasongadina ny hadisoana, ny fotoana ary ny olana momba ny fanaraha-maso. Miaraka amin'ireo varotra doka rehetra dia miasa ny mpanamory debuf manangona sy mitahiry data, izay misy ny fotoana famaliana sy ny fotoana avy amin'ireo mpizara doka, ary ny angon-drakitra misy ny fizarana feno izay azo tehirizina mandritra ny efatra ambin'ny folo andro.
Nanazava bebe kokoa momba ny fampiasana debug mpizara doka i Sidi raha nilaza izany izy "Ny mpamoaka lahatsoratra sy mpamorona votoaty dia mahay mamita renirano manokana ho an'ny mpijery tsirairay. Nefa, hatramin'izao, ny fenitra indostrian'ny famaritahana sy ny fivoaran'ny toe-draharaha eo amin'ny dokam-barotra OTT dia nanasarotra ny fahitana mazava momba ny tena marina mandritra ny fizotran'ny doka. Nanova izany ny Debug Ad Server amin'ny alàlan'ny fampitana mangarahara sy fahatakarana bebe kokoa momba ny fomba itaterana ny doka, manome alalana ireo mpamatsy serivisy hanatsara ny kalitaon'ireo mpijery an-tapitrisany manerantany. ”
Verizon Smartplay Sy Video mivantana
Ny Target amin'ny votoatin'ny Verizon Smartplay dia mamita ireo horonan-tsarimihetsika manokana amin'ny alàlan'ny teknolojia fanodinana miharihary. Satria mitaky mpaninjara votoaty hamerana ny votoatiny mifototra amin'ny toerana misy ny mpijery na ny karazana fitaovana, ny mpanamory dia tokony handefa votoatiny hafa fa tsy hafatra static izay mampidi-doza ny fahaverezan'ny mpijery mba hitazomana ny asan'ny mpihaino. Ao anatin'ny UI tsotra, ny mpanjifa dia afaka manao fandaharam-potoana t0 mialoha ny fotoana ary mamolavola ny fizarana atiny manokana ho an'ny fanaraha-maso tsara kokoa. Ny mpanjifa dia afaka mamorona mpihaino, manangana mandahatra, ary avy eo mampihatra ireo fepetra ireo amin'ny fananana raharaha lehibe.
Ho fanitarana ny alàlan'ny fampitana ny lova, ny fanoloana ny votoaty ary ny fitantanana ny mpihaino dia azo hatsangana amin'ny alàlan'ny fitrandrahana mampiasa ny Fandaharam-potoana sy ny fampandrenesana fampandrenesana (ESNI). Taorian'ny fizotran'ny fanamafisana dia manavaka ny toerana misy azy, fitaovana na tontolo iainana ny mpijery amin'ny Verizon Smartplay raha te hanolotra traikefa tsara indrindra amin'ny toe-javatra misy azy ireo.
Verizon Smartplay Ary OTT
Rehefa miresaka momba ny maha-OTT manokana i Sidi dia nilaza izany “Ny OTT manokana dia miankina amin'ny mpizara hita maso mba hamorona lisitra tsy manam-paharoa momba ny atiny, doka ary torolàlana milalao ho an'ny mpampiasa rehetra. Tokony ho azonao antoka fa azonao atao ny mampifanaraka manokana ny votoatiny ary mampifanaraka ny zon'ny votoatiny eo an-toerana, na manao ahoana ny mijery ny mpijery maro, "hoy i Sidi. "Ny Smartplay dia ahafahanao manangana mpihaino sy tranokala izay nohamafisina isaky ny fananana, ho an'ny mpijery tsirairay izay milalao, na aiza na aiza eto ambonin'ny tany."
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Verizon Media ary Verizon Smartplay, dia jereo www.verizonmedia.com.
Ad fampidirana fampitana injeniera fampitana Engineering Cobalt Encoder afa-po Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor high quality afa-po OTT Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC fifamoivoizana TVU Networks Verizon Verizon Media Verôna Smart Play Video injeniera	2019-09-27
Previous: Operator fakan-tsary / Mpanampy famokarana
Next: Loko "Sneaky Pete" natsangana tamin'ny DaVinci Hamaha Studio